NLD to Boycott Parliament (လွှတ်တော်အစည်းအဝေး NLD သပိတ်မှောက်) | Lumyo Chit
NLD to Boycott Parliament (လွှတ်တော်အစည်းအဝေး NLD သပိတ်မှောက်)
Burmese authorities refusearequest by Aung San Suu Kyi’s party to amend an oath for MPs.
Aung San Suu Kyi attendsameeting of elected NLD officials at party headquarters in Rangoon, April 19, 2012.
Elected representatives of Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy are set to boycott parliament followingarejection by authorities ofaproposed change in the wording of the oath that lawmakers must take.
NLD Party Secretary Nyan Win traveled to the capital Naypyidaw on Thursday to convince election officials and legislators to change the oath fromavow to “safeguard” the constitution to one that pledges to “respect” the set of laws.
But he said that he was informed that the change was “unnecessary.”
“Because of the decision by the Election Tribunal, NLD representatives will not be able to attend the parliament, which will resume on April 23,” Nyan Win said.
But he indicated that there might still bearesolution to the issue.
The decision was made by the election body and not the Burmese government asawhole, including reformist President Thein Sein, according to Nyan Win.
“It didn’t go well,” Nyan Win said of the meeting. “We submitted an interpretation, and they said it is irrelevant.”
“They didn’t say it can’t be changed, but it is not up to this office [to do so] and [they said] it is irrelevant.”
A clause in the oath says lawmakers have to protect and safeguard the Constitution, which NLD officials say contradicts the policy of the party, which grabbed 43 of the 44 seats it contested, include one won by Aung San Suu Kyi herself.
The NLD would become the biggest opposition party in the military-dominated legislature.
The oath is based on the country’s constitution, which Aung San Suu Kyi aims to amend to eventually remove the military from politics.
The constitution was pushed through by the former military junta in 2008. It grants the armed forcesaset number of ministerial posts and one-quarter of the seats in both the upper and lower houses of parliament.
Before the decision on Thursday, Aung San Suu Kyi had told RFA that the NLD would attend parliament after the oath had been changed.
“We won’t say we are not attending parliament. We will attend after the oath [is amended],” she said.
“Regarding changing the phrase, it is in accordance with the constitution … I hope there will not beaproblem with this.”
Aung San Suu Kyi acknowledged that her party would encounter significant obstacles to the democratic process in parliament, but that they were prepared to engage those who are resistant to reform.
“First we have to find out why they don’t want reform. There must beareason. It is difficult to say how we would handle [the issue without knowing the reasons],” she said.
“We expect to interact with various views when we are in parliament. Only then will we be able to decide how to find proper solutions.”
Thein Sein’s nominally civilian government needs Aung San Suu Kyi and the NLD’s participation to add legitimacy to the spate of economic and political reforms it has enacted since taking power from the military in March last year.
The NLD thrashed Thein Sein’s Union Solidarity and Development Party in historic April 1 by-elections which saw Aung San Suu Kyi and other party officials win 43 of 45 parliamentary seats up for grabs.
The NLD, which was banned after it boycotted 2010 national elections, agreed to reregister to contest the by-elections only after the Election Commission changed wording in the political party registration law requiring candidates to “respect” instead of “safeguard” the constitution.
But those changes did not apply to the parliamentary swearing-in oath.
Nyan Win said he was told by the election body thatasimilar oath was taken by most parliamentarians around the world.
He said the NLD would likely make an announcement soon about its next step.
Thein Sein has yet to respond to requests from the NLD to amend the clause in the constitution for the swearing-in oath, and some wonder if he has the political backing to make the change.
Aung San Suu Kyi was set to join parliament on the same day that the European Union was expected to announce the lifting of some sanctions based onameeting of its foreign ministers in Luxembourg—an action she had endorsed while meeting with British Prime Minister David Cameron on Friday.
The U.S. and Australia are expected to also lift some sanctions against Burma in the near future.
But the current impasse could last for several months, and some lawmakers sayaparliamentary vote might be required.
ရှေ့တပတ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး NLD မတက်သေး
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးက ကျမ်းကျိန်လွှာတွင် စကား အသုံးအနှုန်း ပြင်ဆင်ပေးရန် အခြေအနေ မရှိသေးဟု ဆိုသဖြင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) အမတ်များအနေဖြင့် ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး များသို့ မတက်ရောက်ရန် ရာခိုင်နှုန်း များနေကြောင်း သိရှိရသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်တွင် ပြုလုပ်နေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးသင်တန်း တက်ရောက်အပြီး ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့က တွေ့ရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ NLD ရုံးချုပ်တွင် ယနေ့ ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက NLD တောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် “ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါမည်” ဆိုသည့် စကားရပ်အစား “လေးစားလိုက်နာပါမည်” ဆိုသော စကားရပ်ကို ပြင်ဆင်ပေးရန် အခြေအနေမရှိသေးကြောင်း၊ “ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါမည်” ဆိုသော အသုံးအနှုန်းသည် နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြုသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်ကြောင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးက ယမန်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ပြောကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
“၂၃ ရက်နေ့ ကျင်းပမယ့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကို NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ဖို့ မသေချာသေးဘူး။ ဘာကြောင့် မသေချာလဲ။ ကျနော် မနေ့က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးကိုသွားပါတယ်။ ခုံရုံးက ဖိတ်လို့။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ရင် Uphold လို့သုံးတယ်။ Uphold ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို နိုင်ငံတကာမှာလည်း သုံးတယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ရှင်းပြသည့် အချက်များတွင် သဘောမတူသည်များ ရှိ်ကြောင်း၊ သို့သော် သဘောမတူသည့် အချက်များကို ပြန်လည် မပြောခဲ့ကြောင်း၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခုံရုံးက ရှင်းပြသည်ကို နားထောင်ရန်သွားခြင်းသာဖြစ်၍ နားထောင်ပြီး ပြန်ခဲ့ကြောင်းလည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ကျမ်းကျိန်လွှာတွင် စကားလုံးများ ပြင်ဆင်ရေး အဆင်မပြေသေးသည့်အတွက် NLD က သမ္မတရုံး၊ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးသို့ စာရေးသားတင်ပြရန်ရှိကြောင်း၊ ယင်းသို့ ရေးသားတင်ပြမှုနှင့် ညှိနှိုင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ရန် အချိန်မီလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ ပြေလည်အောင် ကြိုးစားမယ်။ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတခု အသွင်မျိုး ဖြစ်မလာအောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သွားမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် လူကြီးတွေရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ ကျနော်စာတစောင် ရေးနေပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတွေ ပို့ပါ့မယ်။ ၂၃ ရက်နေ့ဆိုတာက ဒီနေ့ပဲ ၂၀ ရက်နေ့ ဖြစ်နေပြီ။ စာတွေ သွားတာလာတာနဲ့ ၂၃ ရက်နေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး မီနိုင်လောက်တဲ့ အနေအထား မတွေ့ဘူး။ မတက်ဖြစ်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက များပါတယ်။ လိပ်မူမှာကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး၊ သမ္မတရုံးကို ပို့မယ်။ လွှတ်တော်နှစ်ခုကို ပို့မယ်။ သဘောမတူတဲ့ အချက်တွေကိုတော့ မပြောပါရစေနဲ့။ ကျနော်တို့က သတင်းဌာနကို ပြောပြီး ဖိအားပေးတယ် ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
လတ်တလောတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာသည့် သင်တန်းတရပ်ကို ရုံးချုပ်တွင် ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့ အထိ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာနှင့် ပြန်လည် ကုန်သွယ်ရန် ဂျင်မ် ၀က်ဘ် တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အားပေးသည့်အနေနှင့်…
EU ပိတ်ဆို့မှု တနှစ် ဆိုင်းငံ့မည်
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ဥရောပ သမဂ္ဂ(EU)က…
NLD အမတ်များ လွှတ်တော်တက်ရန် မသေချာသေး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က တောင်းဆိုထားသည့်…
မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်၌ ဗုံးကွဲ
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် ကုန်သွယ်ရေး…
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဦးဆောင် သံဃာ တပါးဖြစ်သော…
နော်ဝေ သံရုံး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်မည်
နော်ဝေနိုင်ငံ သံရုံးကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာရောက်…
ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် အလည်လာရန် အမေရိကန် ဖိတ်ခေါ်
အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြည်ပ…
ဂျပန် ANA လေကြောင်းလိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ပြန်လည် ပြေးဆွဲမည်
ဂျပန် လေကြောင်းလိုင်း(ANA) က မြန်မာနိုင်ငံသို့…
ဦးသိန်းစိန် ဂျပန်နိုင်ငံ သွားမည်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဧပြီ…
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်…
ကျမ်းကျိန်လွှာတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို…
လေတပ် အရာရှိ ၃ ဦး အီလက်ထရွန်နစ် ပုဒ်မဖြင့် ထောင်ချခံရ
မြန်မာ့ တပ်မတော်(လေ) လေတပ် အရာရှိ ၃ ဦးကို မကြာသေးခင်က…
အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦး…
အမေရိကန်နှင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံများက မြန်မာအပေါ်…
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လည်ပတ်နိုင်ရန်…
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲများကို ကင်မရွန် ချီးကျူး
မြန်မာနိုင်ငံသို့ မနက်ဖြန်တွင် လာရောက်မည့်…
မအေးယုအောင်အမှု ရဲနှင့် တရားသူကြီးကို တရားစွဲမည်
ပဲခူးမြို့နယ် ဒု တရားသူကြီး၏ ဇနီးက မီးပူနှင့်…
ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ၈၈ နှင့် ကယန်းမျိုးဆက်သစ် ပူးပေါင်း
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို Elie Wiesel ဆုချီးမြှင့်မည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်…
ပိတ်ဆို့မှုများ အမြန်ဆုံး ရုပ်သိမ်းသင့်ဟု ICG ပြော
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား အထောက်အကူပြုသည့်အနေနှင့်…
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထပ် တွေ့မည်
မနက်ဖြန်တွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ၊…
ဖုန်းနှင့် အင်တာနက် အတွက် ဖိုင်ဘာ ကွန်ရက် တည်ဆောက်မည်
ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန…
ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ လွယ်ကူဖွယ်မရှိဟု ဟီလာရီ ကလင်တန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သတိပေး
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စ ဟီလာရီ ကလင်တန်က…
ဂျင်မ် ၀က်ဘ် နှင့် ဦးသိန်းစိန် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်…
ဗြိတိန် ၀န်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည် သွားမည်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်သည်…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော် စတက်တော့မည်
NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လာမည့် ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင်…
အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ပြန်ခန့်မည်
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ ရုပ်သိမ်းထားခဲ့သော မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ…
မတရားအသင်း သတ်မှတ်ထားခြင်း ပယ်ဖျက်ရန် KNU တောင်းဆို
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)ကို မတရားအသင်းအဖြစ်…
မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့မှု ဖယ်ရှားရေး တရုတ်တောင်းဆို
ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ဆွေးနွေးပွဲ မအူပင်တွင် ပြုလုပ်
← Islam in Arakan:
Different Piercings →